Inayiloni isondo lokugijimisa indiphi elenzelwe into esindayo
Inayiloni crane pulley
Inayiloni tower crane pulley
Inayiloni cliver pulley
inayiloni Belt Pulley
Elevator inayiloni pulley
intambo yezintambo umhlahlandlela
izingxenye ezikhethekile ze-nylon
Uwagcina kanjani amasondo enayiloni nsuku zonke?
Ama-ekseli enayiloni namabhere agingqikayo ajikelezayo agcotshwe ngamafutha futhi athanjiswa; ngemuva kokufakwa, ama-asi kanye / noma izikhonkwane zesikhungo sokuphatha ziyaqiniswa. Lonke uketshezi lokuhlanza olusetshenzisiwe akumele luqukathe izithako ezikhukhulayo. Ikhasimende libhekele ukugcinwa okufanele kanye ne ...
Faka isicelo sezingxenye zeNylon
Ngokuthuthuka komnotho womhlaba emashumini eminyaka amuva nje, isidingo semikhiqizo yenayiloni sikhule kakhulu. Njengento engenakubuyiselwa emikhiqizweni yepulasitiki, imikhiqizo yenayiloni isetshenziswe kabanzi emkhakheni wobunjiniyela ngenxa yezinzuzo zayo ezihlukile. Inayiloni (polycaprolactam) ibe ...
Njengento ebalulekile emkhakheni wamaplastiki wobunjiniyela, imikhiqizo yenayiloni manje isetshenziswa kabanzi kwimishini, ezimotweni, ezintweni zikagesi nasezimbonini zezokuxhumana. Lapha, sethula izinzuzo zamapulley enayiloni: 1. Amandla aphezulu emishini; ukuqina okuhle; ukuqina okuhle nokuhlanganiswa ...
No 37, Shanyang Road, Huaian Idolobha, China